Aakar February 11, 2010
हिजो आज त गाडि का खलासी पनि निकै चलाख भइसकेछन् यार, आइडि कार्ड को डेट नै पो हेर्छन् भन्ने कुरा अब पुरानो नै हुन थालिसक्यो । यातायात क्षेत्र मा जति नै कडाइ गर्न खोजेपनि, नक्कली कार्ड र नक्कली कार्डधारीहरु को बिगबिगि नै छ । हुन त विद्यार्थी ले आन्दोलन मार्फत सार्वजनिक यातायात का साधन मा ४५ प्रतिशत छुट पाउँछन् तर मन कुँडिने कुरा, यो सहुलिुयत यही काठमाडौँ आसपास मा मात्र देखिन्छ । काठमाडौँ बाट केही टाढा पुग्ने बित्तिकै कार्ड केही भ्यालु नै राखीँदैनन्, गाडिवालाहरु ।
हुन त काठमाडौँ बाट बाहिर जाने दैनिक दिवा तथा रात्री बसहरु ले पनि, भनेअनुसार विद्यार्थीलाई भाडा मा छुट दिँदैनन् । यति हुँदा हुँदै पनि यो आफैँ मा जटिल विषय बनेको छ, सहुलियत को लागि अधिकांश कार्डहरु नक्कली बनाइएकाछन् । जसले गर्दा सक्कली कार्डधारीहरु ले पनि छुट पाउँदैनन्, कहिलेकाँहि त आज शनिबार बिदा को दिन भनेर पनि छुट दिँदैनन्, गाडिवालाहरु ! खैर, आज मैले यो कुरा मा बहस गर्न खोजेको त होइन ।
मात्र म यहाँ आज आफूले खिचेको फोटो देखाउँदैछु । यहाँ एउटा फोटो ले भन्छ, ‘गाडि मा छुट लिने हो भने, भर्ना गरेको रसिद लिएर आउ’, अनि अर्को फोटो ले भन्छ, ‘नक्कली परिचयपत्र देखाइ, सही विद्यार्थीलाई बेइज्जत नगरौँ’ । पहिलो फोटो, धुलिखेल बाट काठमाडौँ जानेक्रम मा, बस भित्र खिचेको हुँ भने दोश्रो फोटो काठमाडौँ चक्रपथ मा चल्ने माइक्रो भित्र खिचेको हुँ । फोटो को बारेमा यहाँहरुले आफ्नो विचार लेख्न सक्नुहुन्छ । यस्तो समस्या को समाधान के हुनसक्छ ?
Yatriji February 11, 2010 at 6:09 PM
हा हा हा.....!! 'अजब देश को गजब सिस्टम' रहेछ यार । अब हुँदा-हुँदा भर्ना भएको फर्म त्यो पनि सक्कली नै चहिने बाफ रे ! केही बर्ष पछी विद्यार्थी शहुलियत लिन शिक्षा मन्त्रालय बाट मन्त्री को सक्कली तोक को कगज माग गर्न सक्छन यि खलासीहरुले । मेरो बिचारमा यो समस्या समाधानको लागि सम्भन्धित निकायले एउटा छुट्टै Discount-कार्ड issue गर्न सक्छन ति विद्यार्थीहरुलाई जस्को साथ मा valid-ID कार्ड हुन्छ । र यस्का लागि एउटा छुट्टै उच्च स्तरिय सम्यन्त्र बनाउनु पर्ने हुन्छ फेरी ।
prelude February 11, 2010 at 11:59 PM